Nzukọ Ndị otu Microsoft na-achọ inweta ọtụtụ ihe nkiri sinima
Microsoft na-arụ ọrụ na mmelite ọhụrụ na ngwanrọ mkparịta ụka vidiyo nke ga-enye ndị otu nwere ngwaọrụ dakọtara ohere iji ọtụtụ igwefoto na Otu Microsoft.
Agbanyeghị, enwere nsogbu, n'ihi na njirimara igwefoto ọtụtụ ọhụrụ a ga-arụ ọrụ naanị na ụfọdụ ngwaọrụ Microsoft Teams Rooms.
Maka ndị na-amaghị ya, Microsoft Teams Rooms bụ ngwaike nzụkọ vidiyo raara onwe ya nye yana ngwọta ngwanrọ nke a na-akpọbu Skype Rooms. Ngwaọrụ Microsoft Teams Rooms gụnyere isi otu, igwe okwu, ihe ngosi na ekwentị desktọpụ, mmanya mmekọ, kamera weebụ, na ndị ọzọ.
Dị ka akụkọ ọhụrụ si dị na Microsoft 365 roadmap, njirimara a na-emepe ugbu a ma na-atụ anya ka a ga-ebuga ya na ngwaọrụ Microsoft Teams Rooms dị ka Surface Hub 2S na Jenụwarị nke afọ na-abịa.
Gbanwee n'etiti ọtụtụ igwefoto
Ozugbo njirimara ọhụrụ a dị, otu ndị nwere nzukọ ma ọ bụ ọnụ ụlọ ogbako nwere ọtụtụ igwefoto vidiyo ejikọrọ na ọnụ ụlọ otu Microsoft ga-enwe ike ịgbanwe n'etiti ha n'oge oku vidiyo.
Iji mee nke a, ọ ga-adị ha mkpa ịpị akara ngosi akụ nke na-agafe akụkụ anọ na ala nzukọ otu iji hụ ndepụta igwefoto dị. Site n'ebe ahụ, ha nwere ike ịgbanwe igwefoto n'enweghị nsogbu n'akwụsịghị nzukọ ha.
Dị ka ọtụtụ ngwaọrụ arụnyere igwefoto n'ime ya, mmelite ọhụrụ a na Microsoft Teams Rooms ga-enye ndị otu ụlọ ọrụ ohere iji ha mee ihe. Ụfọdụ ihe eji eme ihe na-agụnye ikike ịgbanwee n'etiti nnukwu egbe gbara na onye nọ n'ihu igwefoto, yana ikike inye ndị bịaranụ anya nso nso nke ngwaahịa ma ọ bụ imewe.
Ugbu a Microsoft na-agbakwunye nkwado igwefoto ọtụtụ n'ime ụlọ Microsoft Teams, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike itinye otu ọrụ a na nzukọ ndị otu oge niile ka ndị mmadụ nwee ike nyekwa nzukọ ha nwee mmetụta sinima.
Ị chọrọ imeziwanye oku vidiyo gị? Lelee mkpokọta anyị nke ngwa nzụkọ vidiyo kachasị mma, kamera weebụ ọkachamara kachasị mma, yana isi okwu ọkpụkpọ ọgbakọ kacha mma.
Site na ONMSFT